Gareth Bale oo laba rikoor jebiyey kulankii xalay xulka dalkiisa ay sida weyn ugu badiyeen xulka Russia | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Gareth Bale oo laba rikoor jebiyey kulankii xalay xulka dalkiisa ay sida weyn ugu badiyeen xulka Russia
Gareth Bale oo laba rikoor jebiyey kulankii xalay xulka dalkiisa ay sida weyn ugu badiyeen xulka Russia
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 21-06-16 8:13 AM Gareth Bale ayaa jabiyay rikoor mudo ka badan nus qarni u yaalay dalkiisa kaas oo uu dhigay mid ka mid ah halyeeyada soo maray xulkaan.
Bale ayaa si qurux badan uga soo dhex muuqanaya koobka Qaramada Qaaradda Yurub ee sida habsamida leh uga socda dalka faransiiska madama uu kulan walba shabaqa soo taabtay oo ka mid ah kulamada groupka B, waxeyna taas uga dhigan tahay inuu noqday gooldhaliyaha ugu sareeya Wales tartamada caalamiga ah madama tartankaan Wales uu u yahay kii labaad oo ay ka qeyb galaan.
Rikoorka xiddiga ugu goolasha badan tartan caalami ah waxaa horay u heystay Ivor Allchurch oo tartankii koobka Aduunka sanadii 1958-dii dhaliyay laba gool tartankaas ayaana ahaa kii koowaad koodii labaadna waa kan ay hadda ciyaarayaan.
Kaliya maahan inuu taariikh wadankiisa ka sameeyay ee sidoo kale koobka qaramada yurub ayuu taariikh ka sameeyay isagoo barbareeyay rikoor ay 12-sano ka hor ugu dambeysay in la sameeyo madama uu sadexda kulan ee groupka shabaqa soo taabtay waxaana markii ugu dambeysay la sameeyay sanadii 2004 markaas oo tartanka lagu martigaliyay Portugal.
Milan Baros oo ka tirsanaa xulka Czech Republic iyo Ruud Van Nistelrooy oo ka tirsanaa xulka Holland ayaa labaduba tartankaas sameeyay iney shabaqa gaaraan sadexda kulan ee groupka, mana jirin xidig sidaas sameeya tartamadii Euro 2008 iyo Euro 2012.